Mmekọrịta - AfricaArXiv
By AfricaArXiv , 4 ụbọchị 4 ụbọchị gara aga
By Johanssen Obanda, 1 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
By Johanssen Obanda, 2 ọnwa 5 ụbọchị gara aga
Omume Kachasị mma na nozọ Ọhụrụ N’ịchọ Ntụle Ọgbọ
AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, na PREreview na-esonye ọnụ iji chịkọta ndị sayensị si n'ofe Africa na ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nchọpụta metụtara Africa maka usoro mkparịta ụka ọfụma 3 na nyocha ndị ọgbọ.
By Johanssen Obanda, 5 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
PLOS na TCC Africa Imekọrịta iji kwado Ndị Na-eme Nchoputa Africa
Obi dị anyị ụtọ ịkọsa ozi ọma na onye nkwusa Open Access PLOS na onye anyị na ya na-emekọ ihe, Centerlọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwukọrịta (TCC Africa) na-emekọrịta ihe ọnụ iji kwalite ọdịnihu Open Science.
By Johanssen Obanda, 5 ọnwa 5 ụbọchị gara aga
Mwepụta nke Science Translate
Sayensị ịsụgharị nwere mmasị na ntụgharị akwụkwọ nke ndị gụrụ akwụkwọ. Science Translate bụ otu ndị ọrụ afọ ofufo na-emeghe nwere mmasị iji melite nsụgharị nke akwụkwọ sayensị. Otu a gbakọtara iji kwado ọrụ na ngwaọrụ, ọrụ na ịkwado ịsụgharị sayensị.
By Otu Tụgharịa Science, 6 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
TCC Africa na Eider Africa rụkọtara ọnụ na ndị nyocha Mentor Early Career si Sub Sahara Africa
Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha, ikekwe ị maara usoro ndụ nyocha na nsogbu niile na ohere ndị ọzọ. Ọ bụ ozi ọma ma ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha sitere na Sub-Sahara Africa n'ihi na ndị mmekọ anyị, TCC Africa na Eider Africa ekwuputala mmekorita ha iji nye ndụmọdụ GỤKWUO…
By Johanssen Obanda, 6 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
Nsogbu nke Discoverability
AfricArXiv na aru oru na mmekorita ya na Open Knowledge Maps iji mee ka ahuru nke nyocha nke Africa. N'etiti nsogbu nchọpụta, njikọta ọnụ anyị ga-aga n'ihu Open Science na Open Access maka ndị nyocha Africa gafere mpaghara Afrika. Na nkọwapụta, mmekota anyị ga-akwalite nyocha Afrika niile na Foster Open GỤKWUO…
Ocean Acidification Africa (OA-Africa) bu netaneti pan-Afrika nke kpokotara iji dozie ma kwalite mmata na nyocha nke oke osimiri (OA) na Africa.
By Sam Dupont, 7 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
Mgbasa ozi na-aga nke ọma: nhazi usoro & nkwado nke OSF
Anyị nwere ekele maka ndị niile nyere aka na nnabata na ndozi AfricaArXiv na Open Science Framework (OSF).
By AfricaArXiv , 7 ọnwa 7 ụbọchị gara aga
Categories Họrọ Atiya Nkwupụta (15) Ike Owuwu (7) Mmekota (30) EGO-19 (10) Omume (7) Izugbe (9) Akụrụngwa (1) Amaala obodo (3) Ajụjụ ọnụ (8) Asụsụ dị iche iche (10) Meghee oghere (38) Sayensị Na-emeghe (17) Mgbasa ozi mmekọrịta (2) Nyocha ndị ọgbọ (8) Podcast (1) Mbido (11) Mbipụta (15) Akuko (1) Nkwukọrịta sayensị (17) Nkwenye (3)
Onye nyocha Afrịka Amamịghe echiche ASAPbio Ndabere BlackBay NwaigweXNUMX Center maka Open Science nkata Covid-19 Sayensị Decolonise Mkparịta ụka Ihe Dijitalụ Nchọpụta Nchoputa nke nyocha Africa Afrịka Afrịka Ego Joy Nwango asụsụ dịgasị iche Masakhane Usoro nhazi asụsụ Mahadum Omdurman Islamic imeghe oghere Mepee Mepee Ihe Ọmụma emeghe sayensị Mepee Sayensị Sayensị OSF Nyocha ndị ọgbọ akwusila Nyocha pịa ebipụta Bipụta nyochaa ngwa ngwa Ntughari Research Nkwurita Ozi Nkwukọrịta Sayensị ScienceOpen Sudan Ebumnuche ndị nwere ike ịzụlite TCC Africa Tụgharịa Sayensị translation Nzipụta